Madaxda Wadamada Reer Galbeedka oo si xoogan u cambaareeyay weerarka lagu qaaday Wargeyska Charlie Hebdo - iftineducation.com
Madaxda Wadamada Reer Galbeedka oo si xoogan u cambaareeyay weerarka lagu qaaday Wargeyska Charlie Hebdo
iftineducation.com – Madaxda Wadamada Reer Galbeedka, ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkii qorsheysnaa ee maanta lagu qaaday Wargeyska Charlie Hebdo, oo ka soo baxa Magaalada Paris ee Caasimadda Faransiiska.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Hussein Obama oo cambaareeyay weerarkaasi, ayaa wuxuu ku sheegay mid wuxuushnimo ah, isla-markaana ay ka xun tahay Dowladdiisa.
Ra’iisal Wasaaraha Britain David Cameron oo isna ka hadlay weerarkaasi, ayaa si xoogan u cambaareeyay, wuxuuna sheegay inay ku biirayaan Faransiiska, si gacan adag looga hortaggo kuwii weerarkaasi geystay.
Ra’iisal Wasaaraha dalka Jarmalka haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel, ayaa iyana si xoogan u cambaareysay weerarkaasi.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande oo sidoo kale cambaareeyay weerarkaasi, ayaa ku sheegay mid wuxuushnimo ah, ayna baarayaan kuwii geystay.
Dadka lagu dilay weerarkaan, ayaa waxay 10 ka mid ah yihiin Suxufiyiinta Wargeyska Charlie Hebdo, oo uu ku jiro Tafaftirihii Wargeyskaasi, iyadoo labada kalana lagu sheegay askar ka tirsaneyd Booliska.
Weerarka lagu qaaday Wargeyskaan, ayaa wuxuu ka dambeeyay markii uu sameeyay kartoon jees jees ah, oo lagu aflagaadeynaayo Nabi Muxamed (NNKH).
Booliska Faransiiska, ayaa sheegay in labadii nin ee weerarka geystay ay ku dhawaaqayeen “Allahu Akbar” iyo “Waan u aargudnay Nabigeena”.
RIIX HALKAAN KA DAAWO VIDEO GA WEERARKA
Maxkamadda Ciidamada Puntland oo maanta xukun dil ah ku riday askari dilay askari kale (Daawo Sawirada)
Ammaanka Magaalada Muqdisho oo la adkeeyay, xilli Wasiirada Arrimaha Dibadda Igad ay ku kulmayaan Muqdisho